परकम्प पनि भूकम्पजस्तै शक्तिशाली हुन्छ, उच्च सतर्कता अपनाआ‌ैं : भूकम्पविद अधिकारी
आइतबार, असोज ४, २०७७ लाइभ
यज्ञराज जाेशी काठमाडाैं - बुधबार, भदौ ३१, २०७७
२०७२ सालकाे भुकम्पमा सिन्धुपाल्चाेकमा सबैभन्दा धेरै क्षति भएको थियो। फाइल तस्बिर
सिन्धुपाल्चोकको राम्चे आसपास केन्द्रविन्द‌ु बनाएर आज बुधबार एकाबिहानै ५ बजेर १९ मिनेटमा ६ रिक्टर स्केलको भूकम्प गएको छ। राम्चे केन्द्रबिन्द‌ु बनाएर गएको भूकम्पको ठूलाे धक्का काठमाडौं उपत्यकामा पनि महसुस गरिएको थियो।
तर, राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका भूकम्पविद लोकविजय अधिकारीका अनुसार त्यो भूकम्प नभएर २०७२ सालको भूकम्पको परकम्प हो।
उनका अनुसार २०७२ सालयता ५० हजारभन्दा बढी परकम्प गएको रेकर्ड भइसकेको छ। तर, राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले चार रिक्टर स्केलभन्दा माथिका परकम्प ५ सय ४८ पटक रेकर्ड गरेको छ।
उनले भूकम्प गएको लामो समयसम्म परकम्प गइरहने बताए।
'भूकम्प गएको लामो समयसम्म परकम्प गइरहन्छ। कहिलेसम्म जान्छ भन्नेबारे हामी अनुसन्धान नै गरिरहेका छौं', अधिकारीले बुधबार बिहान आयाेमेलसँग भने, 'पाँच वर्ष कटिसक्दा पनि परकम्प आइरहेको छ। अन्य देशमा हेर्ने हो भने भूकम्प गएको केही समयदेखि सयौं वर्षसम्म पनि परकम्प गइरहेका छन्।'
लोकविजय अधिकारी, भूकम्पविद
उनले कतै एक-दुई वर्षमै सकिने भए पनि नेपालमा १० वर्षसम्म परकम्प गइरहने आफूहरूको अनुमान रहेको बताए।
उनले पहिरो गइरहेका क्षेत्रमा ठूलो परकम्प गएकाले जोखिम बढेको बताए।
त्यसबाट हुने सम्भावित जोखिमबाट जोगिन सबैलाई सतर्क रहन उनको आग्रह छ।
उनी परकम्प र भूकम्पमा धेरै फरक नहुने बताउँछन्।
पराकम्पले पनि भूकम्पले जस्तै ठूलो क्षति पुर्‍याउन सक्ने भएकाले सतर्क रहन उनले आग्रह गरे।
'परकम्प भनेको त्यो ठूलो भूकम्पको असर सकिएको छैन भन्नेमात्रै हो', उनले भने, 'शक्तिकै कुरा गर्ने हो भने पनि भूकम्प र परकम्प भनेर फरक पर्दैन। परकम्पले पनि भूकम्पले जस्तै ठूलो क्षति पुर्‍याउन सक्छ।'
भूकम्पबाट जोगिन संरचनाहरू बलियो बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
भूकम्पले आफैं क्षति गर्ने नभई हामीले निर्माण गरेका संरचनाबाट ठूलो क्षति हुने भएकाले भौतिक संरचना निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्छ।
'भूकम्पले आफैं क्षति पुर्‍याउने होइन। हामीले बनाएका संरचना कमजोर भए भने त्यसभित्र परेर मानवीय र अन्य क्षति हुने हो,' उनले भने, 'त्यसैले जहिले पनि भूकम्प जानसक्छ भनेर संरचना बनाउँदा बलियो बनाउनुपर्छ।'
मानिसहरूले थाहा पाउँदासम्म भूकम्प गएर सक्किसक्ने भएकाले आत्तिएर नभाग्न उनको सुझाव छ।
भागेर वा आत्तिएर बाँच्न नसकिने भएकाले त्यसो नगर्न उनको आग्रह छ।
उनले एकपटक भूकम्प गइसकेको ठाउँमा परकम्प गइरहँदासम्म फेरि त्यत्रै शक्तिशाली भूकम्प नजाने बताए।
तर, परकम्प गइरहने भएकाले सावधानी भने अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) मा चेन्नई सुपर किंग्सले विजयी सुरुआत गरेको छ। उसले डिफेन्डिङ च्याम्पियनलाई उद्घाटन खेलमा ५ विकेटले हरायो। गत वर्ष मुम्बईले चेन्नईलाई हराएर उपाधि जितेकाे थियाे। आयोमेल संवाददाता
व्यवसायी अग्रवाललाई ‘प्रबल जनसेवाश्री (चतुर्थ)’ विभूषण
सरकारले व्यावसायिक क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानलाई कदर गर्दै व्यवसायी शंकरलाल अग्रवाललाई ‘प्रबल जनसेवाश्री (चतुर्थ)’ ले विभूषित गरेको छ । आयोमेल संवाददाता
‘मर्नुपरे मन्दिरमै मर्छु, अस्पताल जाँदिन!’
असोज लागेसँगै जुम्लामा चिसो बढ्दो छ। अबको केही सातापछि त तापक्रम माइनसमा पुगेर धाराको पानीसमेत बरफ बन्छ। यस्तो चिसोको सिरेटोसँग पौठेजोरी खेल्दै दुर्गमका नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि लडिरहेका छन् डा. गोविन्द केसी। सुमन खत्री
संक्रमण भएको थाहा पाउने बित्तिकै आत्तिएँ तर, हिम्मत हारिनँ विनोद चौधरी
निजी स्कुलले अब कति शुल्क कसरी लिन पाउँछन्? तर, विद्यालय नै नखुलेका कारण उनीहरूले विभिन्न शीर्षकमा भने शुल्क असुल्न पाउने छैनन्। त्यसका लागि स्थानीय तहले सुरपरीवेक्षण गर्नेछन्। जस्तो कि, निजी विद्यालयले भर्ना शुल्कसहित खेलकूद, प्राथमिक उपचार, कम्प्युटर, ल्याब, परीक्षा शुल्क, यातायातलगायत सबैजसो मासिक शुल्कमै जोडेका हुन्छन्। कृष्ण मल्ल